Puntland oo qaaday taloobin looga hor tagayo cudurka Coronovirus – Somali Top News
March 30, 2020 March 30, 2020 Somali Top News	0 Comments
Shir ay isugu yimaadeen madaxda dowlad gobaleedka Puntland oo ka dhacay magaalada Garowe uu goobjoog ahaa madaxweyne Siciid Cabdillaahi Deni iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cismaan Karaasha, ayaa looga hadlay arrimo ku aaddan amniga Puntland iyo xanuunka Coronavirus.
Gabagabadii kulanka ayaa waxaa laga soo saaray bayaan ku aaddan wixii kulanka looga hadlay, iyadoo lagu amaray ciidamada ilaalada xeebaha Puntland ee loo yaqaanno PMPF in ay ka howlgalaan in xeebaha ku teedsan Puntland aysan soo gelin doomaha kaluumeysiga sharci darrada ah si looga hortago caabuqa COVID-19.
Ugu dambeyn kulanka ayaa bulshada loogu baaqay in ay u hoggaansamaan awaamiirta madaxda soo rogeen sidoo kalena ay qaataan talooyinka caafimaad ee ku aaddan ka hortagga xanuunka Coronavirus kaas oo dunida si ba,an ugu faafay dunidana kala xiray.
Awaamiirtaan ayaa timid ka dib markii dowlad gobaleedyada dalka iyo dowladda dhexe si wada jir ah u joojiyeen duulimaadyada caalamiga ah ee dalka imanayo iyo kuwa ka baxayo cabsida laga muujinaayo COVID-19.
← Federal Government of Somalia, AFRICOM Target al-Shabaab
Dowladda Federalka oo digniin u dirtay dadka dagan dhulka ciidanka Asluubta →
Puntland oo ka hadashay qabsoomidda shirweynaha u ku dhawaaqay Saciid Dani
Guddiga doorashada maamulka Koofur Galbeed oo la magacaabay
October 21, 2018 October 21, 2018 Somali Top News 0